Template si aad u naqshadeeysid taraafikada | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Khayraadka, habyaalada
Haddii aad diyaarinaysid naqshadeynta ee a fiiqan internetka hubi inaad tahay template waxay ku timaaddaa mid anfacaya si ay kuu hagto. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga fogaato khaladaadka markaad daabacayso iyo wixii ka sarreeya oo dhan si aad uga fogaato cabsida iyo sixitaanka daqiiqadda ugu dambeysa maxaa yeelay qoraal ama sawir aadan fileynin ayaa la jaray.
Aaladda ayaa ku jirta Qaabka AI (Sawirqaade) wuxuuna leeyahay khadad isku laablaabma taraafikada, meelaha dhiigu ka baxayo, meelaha wax lagu daabacayo, qoraalada hagida, iwm. Shaki la'aan, haddii aad u isticmaasho tusaalahan buug-yarahaaga waxaad samayn kartaa naqshad xun, laakiin qoraalka ama sawirka waligiis lama jareynayo.
Xiriirinta soo degsashada ee aan kaaga tagnay hoosta waxaad ka heli doontaa arrimo badan oo ka mid ah buug-yaraha iyo buugaagta yaryar ee waxtarka u yeelan doona ololahaaga xayeysiinta ama kor u qaadida ganacsigaaga
Degso | Mawduucyada gawaarida internetka
1 Waa maxay triptich
2 Waa maxay qaabka loo yaqaan 'triptych format'
3 Soo dejiso tusmooyinka qoraalka
3.1 Buug-yaraha ganacsiga soo-gaabinta
3.2 Triptych oo buluug ah loogu talagalay waraaqaha xaashiyaha
3.3 Buug-yaraha ganacsiga ee aan la taaban karin - cagaaran
3.4 Ganacsi ahaan muuqaal - buluug ah
3.5 Qaababka joomatari ee loo yaqaan 'triptych'
3.6 Template Trifold Casri ah
3.8 Buug-gacmeedka gacmaha
3.9 Qaabab laba geesood ah oo loo yaqaan 'triptych'
3.10 Triptych oo leh wareegyo midab leh
3.11 Buug yar oo xirfadle ah
3.12 Xirfadle lix geesoodle xirfadle ah
3.13 Buug-yaraha iibka xirfadeed
4 Websaydhada si aad ugu sameysid taraafikada qadka
Waa maxay triptich
ka triptychs waa kheyraad aad u wanaagsan oo lagu soo bandhigo mashruuc cusub taas oo aan ku iibin doonno adeegyada qaar ama wax soo saar. Xaqiiqdii, wali si balaaran ayaa loo adeegsadaa waxaana mahad dheeraad ah u leh sheybaarada aan ka heli karno shabakada sidaa darteed uma baahnin inaan raadsano naqshadeeye si loo abuuro mid shaqsiyeed. Waxaan ku tusinaynaa waxa ay yihiin iyo sida loo sameeyo.
Iyaga oo maanta la sameeyo waxay u egtahay inaan u socon doonno shaqada, laakiin waxaa jira degello websaydha ah oo naga caawin kara inaan abuurno mid shaqsiyeed haddii aanaan doonaynin shaxankaas oo waliba ku habboon. A qaab muuqaal ah dhammaan noocyada xalka in dhammaan fikradaha aan hoos ku soo bandhigi doonno, hubaal waad ka farxin doontaa macaamiishaadu markay ku weydiistaan ​​seddex nooc. U tag.
'Triptych' waa buug yar oo si ballaaran loogu adeegsado xayeysiinta waana noo ogolaanayaa, saddex meelood ayaan isku laabay, tus dhammaan macluumaadka aan u baahan nahay si aan u soo bandhigno wax soo saar ama adeeg shirkadeed. Caadi ahaan cabirkiisu waa 297 x 210 mm waxaana badanaa loo yaqaan A4.
Haddii aan u baahanahay badeecad aan rabno tus tusmooyinka macaamiisha khibradooda, liiska faahfaahsan ee faahfaahinta farsamada ah iyo sawirradaas oo muujinaya faahfaahin kasta oo ka mid ah badeecadaas ama adeeggaas, gawaarida leh dhammaystir wanaagsan ayaa badanaa bixiya joogitaan aad u wanaagsan. Kaliya maahan muuqaalka, laakiin dhammaan macluumaadka ay ku jiri karto.
Caqli ahaan, at noqo buug yar oo macluumaad ah oo isku laaban saddex qaybood, Ma noqon doonto mid raqiis ah sida caadiga ah ee qofku sameyn karo, laakiin sababo gaar ah oo muhiim ah sida shirarka, hadlayaasha, furitaanka xogta ama soo bandhigida marti qaas ah waa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan.
Waa maxay qaabka loo yaqaan 'triptych format'
Waxaan horey uga soo hadalnay cabirka caadiga ah leh A4 iyo 297 x 210 milimitir. Laakiin waxaan sidoo kale ka hadli karnaa qaybaheeda ugu muhiimsan. Sida ku qoran buug-yarahan kasta, daboolka ayaa ah dhidibka ugu weyn iyo halka ay tahay inaan ogaanno sida loogu koolkooliyo macmiilka suurtagalka ah ee soo maray miiska.
Daboolkaas ayaan kari karnaa dhig halheyska ama halkudhiga badeecada iyo shirkad leh sawir si dhakhso leh u aqoonsada adeegyadeeda ama alaabteeda. Waa meesha ku habboon astaanta shirkadda waxayna kuxirantahay shaxanka waxaan uga bixi karnaa naqshadaha ugu yar illaa kuwa kale ee casriga ah ee soo jiidashada leh; had iyo jeer adigoon ilaawin shaqada aasaasiga ah ee gawaarida, taas oo had iyo jeer lagu xirayo shirkadda ama ololaha suuqgeynta ama xayeysiinta.
Taarikada inteeda kale ee wejiyadooda waxay noo oggolaaneysaa inaan ku milicsanno dhinacyada aan u tixgelinno kuwa ugu muhiimsan shirkadeena ama wax soo saarkeena. Haddii aan ka hadleyno maqaasiinka khamriga, waan kari karnay muujiyaan dhinacyada ugu caansan ee canabka goostay iyo dhinacyadaas habka geeddi-socodka qamriga. Triptych wuxuu noo ogolaanayaa inaan si muuqaal ah u muujinno, iyo sidoo kale xog-ogaal ahaan, faahfaahintaas oo bixiya macluumaad dheeri ah.
Booska uu ku fadhiyo triptych dartiis, waan awoodnaa u isticmaal sawirro waaweyn sida inaan ku ciyaari karno qaabkaas toosan ee toosan; had iyo jeer waxaa jiri doonta ikhtiyaarka ah in la isticmaalo taxane sawirro ah oo markii la furo loo yaqaan 'triptych' la furo sawir dhammaystiran.
Muhiim in macluumaadkaas iyo sawirradu waxay kordhiyaan xiisaha macaamiisha ku saabsan alaabtayada. Laga soo bilaabo maxay noqon laheyd dhalada lafteeda oo leh muraayad la buuxinayo si loo muujiyo qaabkeeda iyo midabkeeda, sawirradaas beerta canabka ah oo leh daqiiqado ururinta iyo faahfaahin. Nidaamka oo dhan laga soo bilaabo canabka ilaa sheyga ugu dambeeya waxaa lagu soo ururin karaa khamrigaas iyo sawirada muujinaya farsamooyinkooda.
La xaashida ugu dambeysa waxaa looga tagi karaa xiriir, liiska martida ama khariidada aagga.
Soo dejiso tusmooyinka qoraalka
Hada adiga waxaan tusidoonaa dhowr shey si aad uhesho hore u soo dejistey oo sidaas ugu isticmaal barnaamijyada sida Adobe Photoshop. Waad u habeyn kartaa iyaga sida aad rabto oo markaa aad haysato buug-yare aad u xirfad leh oo aad uga tagto macmiilkaaga isagoo aad u faraxsan.
Xusuusnow taas waxaad horey u liisaska CMYK daabacan. Liisanka kaliya ayaa loo aaneynayaa naqshadeeyaha.
Buug-yaraha ganacsiga soo-gaabinta
Naqshad casri ah oo leh qaabab aan la taaban karin oo leh gooladaha iyo qaababka joomatari ahaan taas oo aad ugu raaxeysaneysa jaleecada hore. Buug-yarahan lagu dhawaaqayo dhacdo ama soo bandhigidda summad leh meelo kala duwan oo loogu talagalay qoraalka iyo astaamaha. Xusuusnow inay tahay inaad isha ku dhufato abuureha markaad ganacsi ahaan u isticmaaleyso.
Xiriir - download
Triptych oo buluug ah loogu talagalay waraaqaha xaashiyaha
Gawaariddani way taagan tahay khadadka qaabaysan iyo buluuggaas taasi waxay noqoneysaa halyeeyada. Dhismayaashu waxay caddeeyeen sababta ganacsiga taas oo ay suurtogal tahay in laga hadlo shirkad sharciyeed, la-taliyeyaal nooc kasta leh ama xitaa shirkad u heellan dhismaha ama naqshadeynta meelaha.
Buug-yaraha ganacsiga ee aan la taaban karin - cagaaran
Gawaarida iskeed iskaga fogeeya labada hore oo leh cagaarkaas iyo in isla waqtigaas uu yahay mid casri ah. Meel ballaadhan oo loogu talagalay astaanta shirkadda iyo qoraallo taxane ah oo lagu qeexayo ujeeddada isku mid ah, iyo sidoo kale bayaanno taxane ah si loo caddeeyo adeegyada ama alaabooyinka. Halista ay leedahay taraafikadaani waa mid aad u cad.
Ganacsi ahaan muuqaal - buluug ah
Gawaarida kale ee quruxda badan ee baxa si fiican ula shaqeeyayaasha, la-taliyayaasha iyo qareennada darnaanta iyo inay labaduba aad u casri tahay mahaddeeda naqshadeeda naqshadaha kala duwan. Sidoo kale ma jiraan sawirro muujinaya dhismayaasha shirkadda iyo taxane ah "widgets" oo lagu muujinayo fikradaha iyo adeegyada shirkadda.
Qaababka joomatari ee loo yaqaan 'triptych'
Buug-yare kale oo loogu talagalay shirkadaha ay ku jiraan raadinaya meelo badan oo qoraalka ah iyo inaad ubaahantahay shirkad doonaysa inay si cad ugahadasho dhamaan adeegyada ay bixiyaan. Midabada kaladuwan waxay abuuraan qaab nolosha iyo firfircoonida siiya guud ahaan oo ay u isticmaali karaan suuqgeynta ama wakaaladaha xayeysiinta.
Template Trifold Casri ah
Gawaaridaan tooska ah waxaan si toos ah ugu soconnaa nolosha magaalada inay sii socoto isla ujeeddooyinkaas hore. Iyagu waa noocyo casri ah oo casri ah oo faahfaahinta qaarkood sida qaab qorista, midabada loo adeegsaday bayaannada iyo walxahaas muuqaalka ah ayaa lagu qancay inay taxaan qaar ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee adeegga ama soo jeedimaha ay soo bandhigtay wakaaladda xayeysiinta ama suuqgeynta.
Gawaaridan Raac tilmaamaha kor ku xusan inkasta oo lagu ciyaarayo wejigooda midab buluug ah oo cadaalad ah dhagan iyo sawirro taxane ah oo soocelinaya taabashada magaalooyinka ee hay'adda, qareennada, la-taliyayaasha iyo inbadan. Waxay la socotaa isla bilicsanaanta baaragaraafyada, inkasta oo ay ka sii xoog badan tahay gooladaha iyo midabkaas midabka leh. Gawaarida kale ee loo yaqaan 'triptych' ee loo tixgelinayo inay ku hayaan noocyo badan oo iyaga ka mid ah gacmaheenna oo markaa u siiya macaamiisha xalal kala duwan.
Halkan halyeeyada waa gacmaha la dhigayo sida kuleyliyaha loo adeegsan karo si dhammaystiran leh cod waxbarasho. Gacmo majaajillo aad u majaajillo leh oo sidoo kale muujinaya in dhinaca taxaddar la'aanta badan ee waxa koorsada suuq geynta internetka ama qorsheynta sanadka dugsi kasta uu noqon doono. Buug yar oo macluumaad ah oo tayo leh oo aad u qaas ah sababtoo ah gacmahaas muujiya.
Qaabab laba geesood ah oo loo yaqaan 'triptych'
Culus, xarrago leh oo casri ah mahadsanid midabka loo xushay bayaanka iyo dhismooyinka laba geesoodka ah ee ka tagaya kuwa casriga ah. Waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada xirfadleyda, in kasta oo loogu talagalay hal-abuurka sida suuq-geynta iyo xayeysiinta, xitaa lama rinjiyeyn. Mid kale oo ka mid ah taraafikada midabada leh ee liistadan ku yaal si aanad u seegin midna.
Triptych oo leh wareegyo midab leh
Midabku waa halyeeyga sida ay u yihiin wareegyada kaladuwan ee kujira buugyarahan macluumaadka saddex-geesoodka ah. Waxaa sidoo kale lagu ciyaaray midabyo kala duwan oo ku jira jumladaha iyo mad-madowga isla wareegyadaas kaga tag santuuqa sariirta oo aad u wanaagsan. Nadiifi oo u nadiifi noocyada kale ee xalalka aan ahayn kuwa ilaa hadda la baray.
Link: rel = »nofollow» soo dejiso
Buug yar oo xirfadle ah
La mid ah kuwa kale ee liiska ku jira, laakiin leh qaabab qaloocsan iyo liintaas taasi waxay qaadataa doorka hogaaminta inuu noqdo dunta guud ee ku hogaamisa macmiilka qaybaha ugu muhiimsan ee shirkadeena ama adeegyada aan bixin doono.
Xirfadle lix geesoodle xirfadle ah
Sidaan oo kale lix geesoodka waa waxa amraGreen sidoo kale wuxuu la wareegayaa labada qaybood ee muuqaalka ah iyo midabka qoraalka si uu ugu sameeyo wada noolaansho wanaagsan kuwa ku qaata buugyarahan gacmahooda.
Buug-yaraha iibka xirfadeed
Gawaaridaas la ciyaaro kaararka kale iyo taas oo aan loo baahnayn sawirro iyo midab u jiidaya midabbo diiran. Ha sameyn lumiso aragtida midabka si loo ogaado sababaha ay u yihiin.
Websaydhada si aad ugu sameysid taraafikada qadka
Xiriir: Buug-yaraha Canva
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Template si aad u qaabeyso taraafikada
MARKA DHAGEYSO BARNAAMIJKA Q AM SIDEE U FURI KARAA WA Q MA U BAAHANAHAY SHAQO ISKUUL OO AAN SOO SAARO OO AY KU SOO BAXAY SOO GAL
Waa salaaman tahay, habeen wanaagsan, waxaan xiiseynayaa inaan soo dejiyo shaxanka ugu horreeya ee loo adeegsado qaabeynta triptych ee Sawirka oo markaan isku dayo inaan soo dejiyo ay i siinayso qalad, waa la tirtiray runtiina waxaan doonayay inaan kaa codsado raalli ahaanshaha inaan mar kale soo galiyo , Anigu waan ku cusbahay tan runti maalin kasta waxaan ku dadaalaa inaan wax yar barto, waxaan rajeynayaa caawintaada baloog ee aadka u fiican.
SIDEE AYAAN KU QAADAN KARAA QARANKEYGA